टिटिकाका तालमा जानुहोस्, पेरूमा अचम्म यात्रा समाचार
किन हो Tititica ताल? किनकि यो विश्वमा सब भन्दा उच्च नाविक ताल हो र किनकि यो स्थानीय संस्कृतिमा हजारौं वर्षदेखि जरा गाडेको छ। यो एक हो सबैभन्दा लोकप्रिय पेरू पर्यटक आकर्षणहरू विश्वमा र यदि तपाईं यात्रामा जानुहुन्छ भने तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न।
यो सुन्दर पानी मिरर पेरू र बोलिभिया द्वारा साझा गरिएको छ र यसको सबैभन्दा प्रसिद्ध पोस्टकार्डमध्ये स्वदेशी डु boats्गा पनि छ जुन शताब्दीयौंदेखि यसको माध्यमबाट जोत्दै आएको छ। हामी तपाईंलाई यो जान्न आमन्त्रित गर्दछौं त्यसैले हामी तपाईंलाई यहाँ छोड्छौं व्यावहारिक जानकारी गर्न को लागी
1 लेक टाइटिकिका
2 टिटिकाका तालमा जानुहोस्
पेरूको तालमा यसको छिमेकी बोलिभिया भन्दा ठूलो हिस्सा छ। तालको औसत गहिराइ १०० मिटर भन्दा बढी छ तर यसको गहिराइमा लगभग 100०० पुगेको छ। वास्तवमा पानीको दुई निकायहरू छन् जसको बीचमा एक स्ट्रिट, ट्वीकिनाको स्ट्रेट छ, 780० मिटर, जुन डु by्गामा पार गरियो। पानीको औसत तापक्रम १º डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ त्यसैले तिनीहरू एकदम सुन्दर छन् र बर्षको मौसमसँगै धेरै परिवर्तन गर्दछन्। यदि तपाइँ ग्रीष्म goतुमा जानुहुन्छ भने तपाईको भूँई हल्लाउने केही उग्र आँधीबेहरी देख्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि।
यो एक ताल हो जसको पानी वाष्पीकरणको कारण% ०% हराएको छ, त्यसैले नदीमा बग्ने नदी यति थोरै छ। तिनीहरू केही नुन र धेरै क्रिस्टलीय पानी हुन् यद्यपि भर्खरका वर्षहरूमा त्यहाँ मानिसद्वारा प्रदूषित क्षेत्रहरूको अभाव भएको छैन। स्पष्ट रूपमा यसमा केही समुद्र तटहरू र धेरै टापुहरू छन्, प्राकृतिक र कृत्रिम। कृत्रिम टापुहरू तालको पुरानो क्लासिक हो र नर्कहरूले बनेको छ।
यो बारेमा छ यूरोको टापुहरू, एक जातीय समूह जुन माछा मार्ने र शिकारबाट बाँच्न र सदियौंदेखि निर्माण गरिएको छ क्याटलहरू सहित फ्लोटिंग टापुहरू। मूल टापुहरू छन् र सधैं पेरूको पक्षमा छन्, तर हालसालैका वर्षहरूमा उनीहरू पर्यटकको रूपमा बढेका छन् किनकि उनीहरूले पनि बोलिभियन पक्षमा निर्माण गरेका छन्। मा टहल्नुहोस् "Caballito डे टटोरा"जब उरोसको डु boats्गालाई भन्छन्, यो यस्तो चीज हो जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पर्छ।
टिटिकाका तालमा जानुहोस्
ताल विभिन्न प्रान्तहरु बाट पुग्न सकिन्छ, आठ मा जम्मा र सबै मा स्थित पूनो क्षेत्र। पूनो, त्यसोभए, एक उत्कृष्ट पर्यटन गन्तव्य र दक्षिण अमेरिकाको सब भन्दा चाखलाग्दो ठाउँहरू मध्ये एक हो।
स्पेनिशले १ Pun1668 मा पुनो शहर स्थापना गरे त्यसैले संस्कृतिहरूको परिणामस्वरूप पग्लने भाँडो हेर्न यो एक ठूलो ठाउँ हो। तपाईं सक्नुहुन्छ विमान द्वारा पूनोसँग लिमामा सम्मिलित हुनुहोस् जुलियाकामा एक विमानस्थल छ जुन पूनोबाट आधा घण्टा मात्रमा छ, वा सार्वजनिक वा निजी बस द्वारा। सार्वजनिक बस बाट यात्रा लगभग १ hours घण्टा छ मध्यवर्ती स्टपहरु र निजी सेवा बिना, त्यहाँ पेरू हप छ, यो माथि र डाउन शैलीको हो र सम्पूर्ण मार्गमा स्टप हुन्छ।
पुनोको मुख्य वर्गबाट ​​केवल १० ब्लकहरू विशाल ताल हो र त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युरोहरूले नर्कका डु boats्गालाई आकार दिइरहेका वा भाँडामा लिन सक्छन्। डु ride्गा सवारी। यो पर्याप्त छ कि तपाईं सम्झौता बन्द गर्न को लागी पुग्छ ताकि यो धेरै सरल छ। फ्लोटिंग टापुहरूको यात्रामा दुई घण्टा लाग्छ। तपाईं होटल वा एजेन्सीमा टूर भाँडामा लिन सक्नुहुनेछ तर यसले पक्कै तपाईंलाई अझ बढी खर्च गर्नेछ।
पक्का, बीमा ले तालको किनारमा यातायात समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ एक अनुभव चाहानुहुन्छ जुन केहि अलि अगाडि जान सक्दछ भने तपाईं फ्लोटिंग टापुबाट जान सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ टेक्विल टापुजहाँ क्युचुआ, स्थानीय भाषा बोल्ने लगभग दुई हजार व्यक्ति बस्छन्। पूर्ण यात्रा समय मा विस्तार गरिएको छ किनकि Taquile मा तपाईं यसको बजारको साथ वर्ग भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, केहि शपिंग गरेर केहि खान सक्नुहुन्छ। डु trip्गा यात्रा सहित कुल करीव छ घण्टा अनुमति दिनुहोस्।
अर्को विकल्प छ अमनतानी टापुमा रात बिताउनुहोस् वा गर्नुहोस् कायाकिंग। यी पदयात्रा नामबाट परिचित छन् Titikayak र ती विशेष गरी Llachón मा प्रस्तुत छन्। अमान्तानु टाकीइलको छिमेकी हो तर प्रायः कम हुन्छ। यहाँ लगभग चार हजार मानिस कृषि समुदायमा बस्छन्। त्यहाँ छन् पुरातात्विक खंडहर रहस्यमय द्वारा छोडियो Tiahuanaco संस्कृति र उत्कृष्ट प्राकृतिक दृष्टिकोणको एक मुट्ठी। यदि तपाइँको चीज पुरातत्व र यसको रहस्य हो, जुन यहाँ प्रशस्त छ, तपाइँलाई पनि थाहा छ Sillustani पूर्व Inca कब्रिस्तान, पुनोको नजिक उमायो तालको किनारमा।
चिहानहरू टावरको रूपमा निर्माण गरिएको छ, तिनीहरूलाई भनिन्छ चुलिपास, र १as औं शताब्दीमा Incas द्वारा पराजित कुल्ला संस्कृतिको हो। यद्यपि यी संरचनाहरू र समान संस्कृतिका अन्यहरू अल्टिप्लानोमा भेटिए, यी, यी ती हुन् सिल्लुस्तानीतिनीहरू सबै भन्दा राम्रो संरक्षित छन्। त्यहाँ यी 90 ० वटा चुल्पास वा मृतका घरहरू छन् र तपाईंले देख्नुहुनेछ कि ती नजिकैका खदानहरूबाट निकालेको ज्वालामुखी ढु stones्गाले बनेको छ।
यसको विपरीत, तपाइँ प्रकृति मन पराउनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईले यसलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ताल टिटिकाका राष्ट्रिय आरक्षण। यसका दुई क्षेत्रहरू छन्, एउटा पूनोको खाडीमा छ र स्थानीय समुदायहरूको लागि आवश्यक नर्कहरूको रक्षा गर्छ र अर्को होआनका क्षेत्र हो, केही कम भेटिएको तर प्रजातिहरूमा धनी पनि छ र धेरै चाखलाग्दो छ। यहाँ केहि छन् चराहरूको species०० प्रजाति, १ native स्वदेशी माछा र १ types प्रकारका उभयचर।
सत्य यो हो कि यो सुन्दर ठाउँ सामान्य भन्दा लामो यात्राको योग्य छ, त्यसैले केही दिन बस्नु र स्थानीय संस्कृति र भावनालाई आफुलाई भ्याउन दिनु राम्रो विचार हो। तपाईं जमिनमा रहन सक्नुहुन्छ वा टक्विल वा अमान्टानामा सुत्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। र यदि तपाई शान्त कुराको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ छ अनापिया टापु, बोलिभियाको नजिकको विनयमार्का तालको सेक्सनमा रहेका पाँचवटा टापुमध्ये एउटा हो। स्थानीय समुदायले पर्यटन कार्यक्रम चलाउँछ जसमा आवास, खाना र गतिविधिहरू समावेश छन्।
के तपाई ब्याकप्याकको साथ होइन तर सुटकेस र पूरा बाथरूमको साथ हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले भेट्न भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ सुआसी टापु जुन टिटिकाका तालमा एक मात्र निजी टापु हो। यहाँ छ एन्डियन हाउस, एक पारिस्थितिक होटलले शुद्ध लक्जरीमा सबै समावेशी अनुभव प्रदान गर्दछ: गउरमेन्ट फूड, सौना, कायाकि,, पैदल यात्रा। यो टापु तालको उत्तरमा पुन्नोबाट जुलियाका चार घण्टा सम्म तालमा रहेको आफ्नो डु boat्गामा रहेको छ। यो डु boat्गा तपाईंको यात्राको लागि उरोस र ताउकिलेको फ्लोटिंग टापुहरूमा रोकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » पेरू » टायटिकाका तालमा जानुहोस्, पेरूमा अचम्म